Isku aadka wareegga saddexaad ee FA Cup-ka oo la sameeyey… (Liverpool oo qaabilaysa Everton & Man United oo markale la ciyaareysa Wolves) - Hargeele - Wararka Somali State
(Yurub) 02 Dis 2019. Waxaa la shaaciyey isku aadka wareegga saddexaad ee tartanka FA Cup-ka, waxaana ka soo baxay kulamo xiiso leh.
Liverpool ayaa kulan adag soo dhoweynaysa naadiga Everton, halka Manchester United ay markale la ciyaarayso Wolves.
Chelsea ayaa qaabilaysa Naadiga Nottingham Forest, Kooxda Manchester City ayaa iyaduna nasiib ku leh in lagu beegay naadiga Port Vale, halka Arsenal ay ku aadday Leeds.
Dhammaan 20-ka kooxood ee Premier League iyo dhammaan 24-ka kooxood ee Championship ayaa ku soo biiray tartankan wareeggiisa saddexaad.
Isku aadka oo dhammaystiran halkaan hoose ka eeg:-
Waqtiga la ciyaari doono:-
Dhammaan kulammada wareegga saddexaad ee FA Cup-ka kal ciyaareedkan ayaa la ciyaari doona 3 bisha Janaayo iyo 6 bisha Janaayo ee sanadka cusub.
Wareegga afaraad ayaa isna la dheeli doonaa 25 isla bisha Janaayo 2020.
Wareegga shanaad ayaa isna la ciyaari doonaa 4 bisha Maarso 2020, halka siddeed dhammaadka tartankan la dhelei doono 21 bisha Maarso 2020.
Afar dhammaadka tartankan ama Semi-finalka ayaa la dheeli doonaa 18 iyo 19 bisha April ee sanadka 2020 iyadoo kama dambeysta tartankan ama Finalkiisa la ciyaari doono 23-ka bisha May ee sanadka 2020.
“Saalax wuxuu la mid yahay Cristiano Ronaldo” – Xiddig hore ee kooxda Liverpool ah
Kooxda Arsenal oo la la xiriirinayo xiddig ka tirsan PSG… (Booskee ka dheelaa laacibkaas qudhiisu raba inuu u dhaqaaqo Premier League?)